राम्रो !!! पोर्श Panamera जीटीएस खेल Turismo राम्रो !!! पोर्श Panamera जीटीएस खेल Turismo - LFOTPP
राम्रो !!! पोर्श Panamera जीटीएस खेल Turismo
पोर्शले यसको दुईमा स्प्यामी मोडेलहरू यसको प्यानमेरा दायरामा थप गरेको छ। चार लीटर V8 बिटुरबो इन्जिन (338 केडीई / 460 एचपी) बाट शक्तिशाली प्रदर्शनको साथ, गतिशील चेसिस प्रणालीहरू अनुकूली वायु निलम्बन सहित, र उनीहरूको आफ्नै विशिष्ट डिजाइन तत्वहरू र उपकरण पोर्श Panamera जीटीएस र Panamera जीटीएस स्पोर्ट टुरस्मो को एक- of-a-kind प्रदर्शन प्याकेज। जब तपाईं कारखाना GTS बाट आशा गर्नुहुनेछ, आधारभूत उपकरण प्याकेज विस्तृत छ। उदाहरणका लागि, कालो बाह्य तत्वहरूसँग खेलकुद डिजाइन प्याकेज र आन्तरिकमा ठूला अल्टाटकारा सतहहरू मानकको रूपमा समावेश छन्। अझ के हो, पोर्शले सम्पूर्ण प्यानामेररा दायराको लागि विभिन्न कन्फिगरेसन विकल्पहरूको साथ टाउको-अप डिस्प्ले समावेश गर्न सजिलो र ग्यारेन्टीको पोर्टफोलियो विस्तार गर्यो।
नयाँ पोर्श पनामेरा जीटीएस मोडेलको हृदयमा एक चार-लेटर V8 इञ्जिन हो आउटपुट को 338 केडीई (460 एचपी) र 620 एनएम को अधिकतम टोक, एक भावनात्मक ध्वनि र ड्राइभिङ अनुभव जब मानक खेल निकास sys संग संयुक्त -टेम। 15 सेकेण्डमा 20 से 100 सेकेन्ड सम्म पोर्श पनामाराम जीटीएस र पानामेरा जीटीएस स्पोर्ट टूरिज्मो को एक्सटेन्सन एक्सट्युमप्रोफिक्स इन्जिनियरिङ बिटुरबो इन्जिनले0केडीई (100 एचपी) र 4.1 एनएम द्वारा यसको पूर्ववर्ती निष्पादित गर्दछ। - मानक खेल क्रान्ति प्याकेजसँग सम्बद्धता। दुई मोडेलले क्रमशः 292 र 289 किमी / h को एक उच्च गति प्राप्त गर्दछ। ट्रान्टेक्टिव बल मा कुनै अवरोध छैन किनभने पोर्श ट्रेशन मैनेजमेंट (पीटीएम) को आठ-स्पीड पीडीके दोहोरो क्लच गियरबक्स द्वारा चार-पहिया ड्राइव सिस्टम मा शक्ति को रूप मा प्रसारित छ। तिनीहरूको असाधारण प्रदर्शन केवल 10.3 एल / 100 किमी (खेल टुरिस्मो: 10.6 एल / 100 किमी) को मध्यम खपत संग प्राप्त हुन्छ; यसमा2g / किमी को CO235 उत्सर्जन स्तर (खेल टुरस्मो: 242 जी / किलोमिटर) छ।
Panamera जीटीएस मोडेलको खेलकुद को प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित डिजाइन गरिएको छ, चेसिस प्रणालीहरू प्रभावशाली गतिशील छन्। तीन-च्याम्बर टेक्नोलोजीको साथ अनुकूली एयर निलम्बन मानकको रूपमा लगाइएको छ, जसले लचीला नियन्त्रण र व्यापक वसन्त दर फैलिएको छ। दुई GTS मोडेलहरूमा खेलकुद चेसिसले 10 mil-limetres द्वारा कम गरिएको छ, जबकि पोर्श सक्रिय निलम्बन व्यवस्थापन (PASM) प्रकार्यलाई पनि खेलकुद सेटअपको लागि अनुकूलित गरिएको छ। नतिजा? बकाया पार्श्व गतिशीलता। ठूला ब्रेकहरू (सामने 390 मिलीमीटर, व्यासमा 365 मिलिमिटर) लामो अनुशासनीय गतिशीलताको समर्थन गर्दछ।
पूर्ववर्तीको तुलनामा, नयाँ पोर्श पनामामा जीटीएस मोडेलको मानक उपकरणमा धेरै क्षेत्रहरूमा अपग्रेड गरिएको छ। नयाँ सामने र कालोमा रियर एप्रनको साथ खेल डिजाइन प्याकेज, र थप अँध्यारो तत्वहरूले एथलेटिक उपस्थितिलाई हाइलाइट गर्दछ। जीटीएस मोडेलहरू मानकको रूपमा 20 इन्च Panamera डिजाइन पाङ्ग्राहरूसँग सुसज्जित छन्। आन्तरिक विशेषताहरु कालो अल्टांतारा र anodised एल्यूमीनियम को हलीमुखी तत्वहरु। मानक उपकरणमा गियर-परिवर्तन पेडल्स र एल्टाटकारा ट्रिम र जडान प्लस मोड्युलका साथ डिजिटल सेवाहरूको लागि एक ताप बहुभाषी खेल स्टीयरिंग व्हील पनि समावेश गर्दछ। ओएस-क्लाउड इन्टरनेट जीएसटी प्याकेजको साथ, ड्राइभरले गाडीमा विभिन्न डिजाईन तत्वहरू जस्तै पुनः काउन्टर, डिजाइनर सेम, र जीएसटीएस लोगो क्यारर्मिन रेड वा क्रेयोनको विपरित रंगहरूमा अनुकूलन गर्न सक्छन्।
GTS मोडेलले दोस्रो पीडित पनामामा दायराको रूपमा सबै उही नवाचारहरू प्रदान गर्दछ। यसमा डिजिटल पोर्श उन्नत कर्कपिट, पोर्श ईन्नोड्रोड सहित अनुकूली क्रूज नियन्त्रण, र वैकल्पिक रियर अक्ष स्टीयरिङ जस्ता सहायक प्रणालीहरू समावेश गर्दछ। GTS ले एक हाइलाइट पनि विशेषता गर्दछ जुन सम्पूर्ण Panamera दायरामा नयाँ छ - टाउको-अप प्रदर्शन। डिस्प्ले चालक र प्रो-जेकिहरू द्वारा सम्पूर्ण सान्दर्भिक जानकारी सिधै पूर्ण रङमा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रेखामा कन्फिगर गरिएको हुन सक्छ।
पोर्श मा परंपरा को रूप मा, जीटीएस ग्रान टरस्मो स्पोर्ट को लागि छ। पोर्शको पहिलो सडक अनुमोदित खेलकुद कार, 904 क्यारेरा जीटीएस, सबै 1963 मा फिर्ता भयो, रेसिङ टेक्नोलोजी सडकमा ल्याउन थाल्यो। यो 924 जीटीएस र 928 GTS पछि, जुन 1980s र 90s भरमा अवधारणा खेती गरियो। 2007 मा, जीटीएस ले यसको पुनरुत्थान Carrera GTS सँग मनायो। Panamera जीटीएस को पहिलो पीढी पछि 2011 मा, शुरुआती रूपमा एक खेल सैलून को रूप मा उपलब्ध छ। अब, नयाँ पोर्श पनामाराम जीटीएस स्पोर्ट टुरस्मोको रूपमा पनि उपलब्ध छ। एक ठूलो tailgate संग, कम भार-इन्ल किलोग्राम, सामान डिब्बे मात्रा बढ्यो र4+ 1 सेटिङ् कन्फिगुरेसन, 2017 मा पेश गरिएका मोडेलहरूमा आधारित नयाँ GTS संस्करणमा दैनिक रोजगारीको लागि उच्चतम स्तर प्रदान गर्दछ, र उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि प्रदान गर्दछ।
आठ-सिलेंडर बिटुरबो इन्जिनलाई गतिशील शक्ति, क्षमता र भावनात्मक ड्राइभ प्रदान गर्दछ
नयाँ Panamera जीटीएस र नयाँ Panamera जीटीएस खेल Turismo दुवै Panamera टर्बो मोडेल को रूप मा एक नै V8 बिटुरबो इन्जिन पीढी देखि लाभ। विकासको चरणमा पोर्शका इन्जिनियरहरूले अधिकतम दक्षता र असाधारण प्रदर्शन सुनिश्चित गर्नमा ध्यान दिए। 6,000 र 6,500 rpm बीचको गतिमा, नयाँ पोर्श प्यानामेर जीटीएस मोड्समा चार-लेटर इन्जिन 338 केडीई (460 एचपी) को पीढी उत्पादन उद्धार गर्दछ, 4.8 एचपी द्वारा पूर्ववर्ती मा 8-लीटर V20 ईन्जिनियरिङ् बाहिर गरीदिन्छ। 620 एनएम - 100 एनएमको पछिल्लो मोडेल भन्दा अधिक टोकन - 1,800 र 4,500 rpm बीच गतिमा उपलब्ध छ। नयाँ आठ-सिलेंडर मोडेलले Panamera जीटीएस र Panamera जीटीएस स्पोर्ट टोरस्मो0बाट 100 सेकेन्ड सम्म 4.1 किमी सम्म एच मानक खेल क्रान्टो प्याकेजको लागि धन्यवाद। सैलूनले 200 सेकेण्डमा 15.4 किमी / घन्टाको गति पुग्छ; खेल टूर्टिमोले 15.6 सेकेन्डमा पनि प्राप्त गर्दछ। Gran Turismo 292 किमी / घण्टा को माथिल्लो गति सम्म पुग्छ जबकि स्पोर्ट्स टुरस्मो 289 किमी / घण्टा मा माथि छ। तिनीहरूको असाधारण प्रदर्शन केवल 10.3 एल / 100 किलोमिटरको मोड-मेट खपतको साथ प्राप्त हुन्छ (खेल टुरस्मो: 10.6 एल / 100 किमी); यसमा2g / किमी को CO235 उत्सर्जन स्तर (खेल टुरस्मो: 242 जी / किलोमिटर) छ।
स्ट्राइक कणयुक्त उत्सर्जनको अवलोकनमा युरोपियन युनियन र अन्य बजारहरू यसको स्तरहरू लागू गर्न नयाँ EU उत्सर्जनको स्तरमा सीमित हुन्छन्, नयाँ पोर्श पनामामा जीएसटी मोडेलको सुरुवातले यी ग्याँसहरू पेट्रोल कणसँग फिट भएका सबै गाडीहरू देख्नेछन्। फिल्टर, जुन नयाँ मोडेल वर्ष बाट सबै पनामाराम मोडेलमा स्थापित गरिनेछ। त्यसकारण तिनीहरू यूरो6डी-टेम्प (ईईक्सएक्सएनएमएमएक्स बीजी) उत्सर्जन मानक र साथै चीनमा C6b सँग अनुपालन गर्छन्। यस सील गरिएको सिरेमिक फिल्टरको संरचना डीजल इन्जिनको कण फिल्टरको समान हो, यद्यपि केही अनुकूलनहरूसँग पेट्रो इन्जिनका आवश्यकताहरु पूरा गर्न आवश्यक छ। निकास गैसहरू वैकल्पिक रूपमा छापिएको च्यानलहरू मार्फत त्रिएका छन्, ग्यास कण फिल्टर को पर्खालहरु मार्फत प्रवाह गर्न बाध्य। स्वचालित रूपमा पुनः-पीढी प्रक्रियामा विभाजित जमाहरू बन्द हुन्छन्।
डिजाइन सर्तहरूमा, आठ-सिलेंडर मोडेल एक V-इन्जिनले 90 डिग्रीको बैंक कोणसँग लामो समयदेखि स्थापना गरेको छ। चार सेवन र निकास क्यामशफ्टले 50 डिग्री द्वारा समायोजित गर्न सकिन्छ र एक चिनचोडद्वारा संचालित हुन्छ। चार-वाल्भ इन्जिनले 6,800 rpm सम्मको गति पुग्न सक्छ र 3,996 cm3 को विस्थापन गर्दछ। V8 बिटुरबो प्रत्यक्ष पेट्रोल इंजेक्शन मोडेलको स्ट्यान्ड-आउट टेक-एनिकल विशेषता यसको नयाँ केन्द्रीय टर्बो लेआउट हो जुन भित्री चार्जले भित्ता चार्जरहरूको साथ भित्ता चार्जरहरूको साथमा आन्तरिक भिडीयो, इंजेक्टरहरू कम-बसन्टिङ च्याम्बर, दौड ट्रयाक-उपयुक्त तेल प्रणाली, केन्द्रमा राखिएको छ। - सिल-इनडर लिनर र सिलेंडर ड्याक्टिभ्रेसनमा कोट बुनाइन्छ।
मानक खेलकुद निकास प्रणाली यसको कालो जुम्पा टाँपपिप्स र विशेष रूपमा ट्यून वाल्भ नियन्त्रणको बीचमा सम्पर्क गरिएको अन्तरक्रियाले V8 इन्जिनलाई यसको धनी, विशिष्ट आवाज दिन्छ।
केन्द्रीय टर्बो लेआउट कम संशोधनमा शक्तिशाली टोकक सुनिश्चित गर्दछ
नयाँ Panamera जीटीएस मोडेल मा V8 इन्जिन एक अविश्वसनीय डिग्री को चपलता प्रदर्शित गर्दछ, यहां सम्म कि रिवर्स र पावर रेंज को उच्च अन्त मा। एकै समयमा, आठ सिलिन्डर इकाईले कम गतिमा अधिकतम टोकन प्रदान गर्न सक्षम छ। यी ड्राइभ विशेषताहरू मुख्यतया केन्द्रीय टर्बो लेआउटमा बिटुरबो चार्जिंग प्रविधिको कारण हुन्। V8 को दहन कक्षहरु लाई सजिलै संग जुडी स्क्रॉल टर्बोचार्जर्स आपूर्ति संपीड़ित हावा डिजाइन गरियो। दुई टर्बाइनहरूले विपरीत दिशाहरूमा घुमाउँदछ र सबै भन्दा कम पुनरावृत्तिका स्तरहरूमा पनि अधिकतम टोकन प्रदान गर्दछ। टर्बोचार्जरले 0.8 पट्टीको अधिकतम चार्ज दबाव प्राप्त गर्दछ। निकास ग्यास प्रवाह द्वारा संचालित कम्प्रेसर प्रत्येक टर्बोचार्जरको लागि सेवन हावा गर्दछ। इन्जिनलाई प्रभावकारी रूपमा पुनःसुरु गर्न अनुमति दिन्छ, प्रक्रिया हावा दुई अलग शाखाहरु मार्फत चलाउँछ। V8 बाट माथिल्लो बायाँ र दायाँ intercoolers माथि बहने पछि, वाहन बाहिरबाट प्रक्रिया हवाले प्रत्येक तिर एक थोरै र दाँया सिलेंडर बैंकहरूमा एक थोरै वाल्व हुँदै जान्छ। सङ्कुचन प्रक्रियाको समयमा तापक्रम भएपछि इन्टरकोप्टरहरूले प्रशस्त हवाको तापमानलाई कम पार्छ। यसले हवाको घनत्व बढाउँछ, सिलेंडरमा ओक्सीजन सामग्री बढाउँछ र परिणामस्वरूप दक्षता सुधार गर्दछ।
प्यानमरा इन्जिनहरूको एक प्रमुख विशेषता इन्जेक्टरहरूको केन्द्रीय स्थान हो र दहन कक्ष भित्रको उच्च-दबाव इंजेक्शन वाल्व हो। V8 इन्जिन नयाँ Panamera जीटीएस मोडेल मा फेला पर्यो वाल्वहरु को सात नजल छेद संग प्रयोग गर्दछ। दहन अनुकूलन गर्नको लागी व्यक्तिगत रूपमा गठित नोजल मद्दत, यसैले ईआईई-सायनहरू कम र दक्षता वृद्धि गर्न। र पोर्शले यो हरेक एक सञ्चालन सञ्चालनमा प्राप्त गर्दछ। इन्जिनका इन्जिनियरहरूले इंजेक्शन इन्जिनियरिङलाई प्रयोग गर्दा इन्जिनियर इन्जिनियरिङहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गरेको छ, जबकि उत्प्रेरक कन्वर्टर्सहरू प्रायः अप्ठ्यारो छन्, र इन्जिनलाई पिटाइन्छ र इन्जिनलाई न्यानो हुन्छ। प्रत्येक सिलेंडर बैंक 250 पट्टी को अधिकतम इंजेक्शन दबाव संग उच्च-दबाव पंप संग सुसज्जित छ।
भित्री ग्याँस पछि उपचार मा उत्प्रेरक कन्वर्टर्स संग आंतरिक वी
V8 इन्जिनहरू एक दोहोरो शाखा निकास प्रणाली संग पूर्व र मुख्य उत्प्रेरक कनवर्टर्स र माथिल्लो चरण र डाउनस्ट्रीम रसेन्सरहरूसँग सुसज्जित छन्। डिजाइन सर्तहरुमा, आठ सिलिन्डर इन्जिन केंद्रीय टर्बो लेआउट सँग समान छ जुन यसको उत्प्रेरक कन्वर्ट-ईर्स ईन्जिनियर V मा स्थित छ, इन्जिन नजिक। यो कन्फिगरेसनले सुनिश्चित गर्दछ कि उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली अल्पकालिक समय मा आदर्श परिचालन तापमान पुग्छ। यसबाहेक, टर्बोचार्ज वास्जिग वाल्व खोल्न सुरुवात अवस्थाको समयमा उत्प्रेरक कनवर्टर हीट चाँडो हुन्छ।
सिलेंडर लाइटहरूमा आयरन मिश्र धातुले खपत र तेल खपत कम गर्छ
V8 ईन्जिनियरिङको एक हाइलाइटहरू कास्ट एल्युमिनियम ब्लकमा सिलेंडर लिनङमा लोहे कोटिंग। यसले महत्वपूर्ण रूपमा आन्तरिक घर्षण घटाउँछ, पहिला (कम गुणस्तर ईंधन प्रयोग गर्दा समेत), र तेल खपत। उत्पादन प्रक्रियाको समयमा, सिलिन्डरहरूको सतह एक असामान्य टिकाऊ, कम-घर्षण लोहे कोटिंग संग वायुमंडलीय प्लाज्मा स्प्रे विधिको प्रयोग गरिन्छ। कोटिंग सिर्फ 150 माइक्रो - मोटी मोटी छ। यो फलाम मिश्र धातु पिस्टन के छल्लेहरूमा पुनः-विन्दुबिन्दुमा कुनै अस्तरको पहल लगभग पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ। हल्का वजन कास्ट पिस्टन को डिजाइन नयाँ मिश्र धातु संग लाइन मा अनुकूलित गरिएको छ। पिस्टन के छल्लेहरू क्रोमियम नाइटाइट कोटिंग छ, जुन पूर्ण रूपमा लोहे कोटिंग संग मेल खाने बेला, सबै उपायहरूले आफ्नो पूर्ववर्तीको तुलनामा 50% सम्मको तेलको खपत पुनः दोहोर्याउँछ।
राउन्ड ट्र्याकमा पनि, इष्टतम तेल आपूर्ति
प्रत्येक पोर्शले ट्रयाकमा आफ्नै बाहिर समात्न सक्दछ। नयाँ पोर्श Panamera जीटीएस मोडेलहरूले यस चुनौतीलाई स्वाभाविक रूपमा मास्टर गरे - आंशिक रूपमा उनीहरूको अभिनव तेल प्रणालीको लागि धन्यवाद। यसको लेआउटले सुनिश्चित गर्दछ कि सबै भन्दा चरम पार्श्व र लामो समयसम्म अत्याधिक एक्लिल-ईरेशन बलहरू संतुलित हुन सक्छ। यस प्रणालीको एक प्रमुख पहलू यो तथ्य हो कि तेल नापहरू दुई अलग आपूर्ति शाखाहरूमा विभाजित हुन्छन् - एक इन्जिनको लागि र एक सिलिन्डर सिरका लागि। यी पदहरूमा आपूर्ति उद्घाटन तेल प्रणालीमा प्रत्येक अवयव अनुरूप छ। सुरुवात चरणको दौडान, यो तेलमा दबाब को निर्माण आवश्यक समय मा सकारात्मक प्रभाव छ। द्रुत गतिको निर्माण गरिएको गतिले तेल पम्पमा फिर्ता फिर्तीलाई समर्थन गर्दछ। यो वाल्व यकीन छ कि भित्री तेल को भित्ता मा तेल मा फिर्ता तेल पम्प मा प्रवाह र emp-ty रन नहीं गर्छन। तेलको दबाब आफैलाई एक पूर्ण चरम तेल पम्पद्वारा निर्मित गरिएको छ र निर्दिष्ट इन्जिन अपरेटिङ म्यापमा वाल्व मार्फत विनियमित गर्न सकिन्छ। यो नियन्त्रण वाल्व पनि निर्मित ईन तेल दबाब सीमानामा आउँछ, जुन स्वचालित रूपमा इञ्जिन स्टार्ट-अप चरण र कम परिवेश तापमानमा सक्रिय हुन्छ। मागमा निर्भर गर्दछ, भित्री वी को केन्द्र मा स्थित एक इलेक्ट्रनिक स्विचिंग वाल्व पनि पिस्टन को ठंडा गर्न को लागि नक्शे नियंत्रित पिस्टन स्प्रे नलिका को नियंत्रित गर्दछ। यो नियन्त्रक प्रकार्यले चर्को घाटा घटाउँछ र परिसंचरणमा तेलको मात्रा नियन्त्रण गर्दछ। नतिजाको रूपमा, GTS मोडेलहरूले पनि नर्बर्ग्रिङको प्रसिद्ध नर्सचली लाइफमा उच्च लम्बाइ र पार्श्व एक्सेलेरेशन फोर्सको सामना गर्न सक्छन्।
मानकको रूपमा फिट गरिएको: खेल क्रान्ति प्याकेज खेल प्रतिक्रियाको साथ
Racetrack ड्राइभिङ्ग को अनुरूप पुरा तरिकाले, नयाँ Panamera जीटीएस मोडेल एक मानक खेल क्रानो पैकेज संग लॉन्चर नियंत्रण र मोड स्विच संग, बहुभाषी स्टीयरिंग व्हील मा एक खेल प्रतिक्रिया बटन संग सुसज्जित छ। स्टीयरिंग व्हील मा यसको इर्गो-नामक स्थितिको लागि धन्यबाद, रोटरी मोड स्विचले चालक प्रदान गर्दछ जुन ड्राइभिङ मोडहरू (सामान्य, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस र व्यक्तिगत) मा प्रत्यक्ष पहुँच छ। स्पोर्ट प्लस मोड ट्रयाकको लागि आदर्श छ। यो मोडले ड्राइवट्रेनलाई समायोजित गर्दछ ताकि यसले आदर्श वाहन प्रतिक्रिया र अधिकतम गतिवर्णन गर्न सक्दछ। अधिक, सक्रिय चेसिस घटकहरू - जस्तै अनुकूली हावा निलम्बन, पोर्श सक्रिय सुन्-पेंशन व्यवस्थापन (PASM) र वैकल्पिक पोश गतिशील चेसिस नियन्त्रण खेल (पीडीसीसी स्पोर्ट), पोर्श टोकक व्याख्यान प्लस (पीटीटी प्लस) र पछि अक्ष स्टेयर-इन्ग - अन्तिम प्रदर्शनको लागि एक खेलकुद मोडमा स्विच गर्नुहोस्। खेल प्रतिक्रिया बटन बटन मोड स्विचको बीचमा स्थित छ। यस बटनले 20 सेकेन्डको लागि Panamera को अधिकतम पावर क्षमतालाई बटनको मात्र स्पर्शमा छोर्दछ। यस समयमा, इञ्जिन प्रतिक्रिया अधिक सीधा र सहज छ। पीडीकेले खेल प्लसको मोडमा भन्दा पनि अधिक गतिशील परिवर्तन नक्सामा स्विच गर्दछ, तुरुन्तै 3,000 र 6,000 rpm बीचको दायरामा पुन: घटाउँदछ (जब सम्म बटन पूर्ण-लोड अपरेसनमा थिचिएको छैन)। गियर परिवर्तनहरू धेरै ढिलो हुन्छ।
पोर्श आठ-गति पीडीके इष्टतम सुविधा र अधिकतम चपलताको लागि
अन्य सबै पनामारा मोडेलहरू जस्तै, नयाँ GTS संस्करणहरू पनि आठ-गति दोहोरो क्लच गियरबक्सको साथ आउँछन्। सामान्यतया, आठ-गति पीडीके आदर्श गियर अनुपात फैलिएको र कुशल इन्धन खपतको लागि अनुमति दिन्छ, जबकि अझै पनि अधिकतम आराम र अधिकतम चपलता प्रदान गर्दछ। यही कारण छ कि सातौं र आठौं गियर्सहरू पुनः-कम गर्न सकिने ओभरडियर गियर्सको रूपमा डे-साइन इन गरिएको छ। छठे गियरमा अधिकतम गति हासिल गर्न सकिन्छ। प्यानमाराको आठ गति पीडीकेले गियर परिवर्तन गर्न ट्रान्जिटिव पावरलाई रोक्न सक्छ किनभने अर्को गियरको अनुपात अनिवार्य रूपमा पहिले पङ्क्तिमा पर्खिरहेको छ, दोस्रोको अंश भित्रै सक्रिय हुन तयार छ। पीडीके को स्पोर्टी असाधारण कम्-फोर्टबल गियर बदलाव पैटर्न नयाँ पोर्श पनामामेरा जीटीएस मोडेल को गतिशील चक्र-रेजिस्टको लागि उत्तम म्याच हो।
इलेक्ट्रनिक रूपमा नियन्त्रण बहु बहु प्लेट क्लचसँग चार-पहिया ड्राइभ सक्रिय गर्नुहोस्
पनामामा जीटीएस र प्यानामेर जीटीएस स्पोर्ट टुरिस्मो पोर्श ट्रेक्चर इन्जिनियरिङ (पीटीएम) प्रकार्य को माध्यम ले सडक मा विद्युत प्रदान गर्दछ - एक इलेक्ट्रनिक रूप देखि नियंत्रित, नक्शा आधारित बहु प्लेट प्लेट क्लियर संग एक सक्रिय चार पहिया ड्राइव sys tem। ड्राइभिङ्ग स्थितिमा निर्भर गर्दछ, बहु-प्लेट क्लचले इन्जिनको शक्तिलाई अगाडि र रियर अक्षहरू बीचमा हरेक पटक इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। पीटीएम सेन्सरले चक्र गति, लामो समयसम्म र पारदर्शी accelera-tion बलों, र स्टीयरिंग कोण को निगरानी गर्दछ। पीटीएमले उत्तम प्रदर्शनलाई उद्धार गर्दछ, यसको सट्टा सडकमा सूखी, गीला वा बर्फमा राखिएको छ कि छैन।
चेसिस र चेसिस प्रणालीहरू
समग्र Panamera अवधारणा को लागि, नयाँ जीटीएस मोडेल मा चेसिस को एक खेल कार को प्रदर्शन संग लक्जरी सैलून को आराम संग आराम गर्दछ। तथापि, यसलाई हिज्जे GTS प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न थप गतिशील परिवर्तन दिइएको छ। अन्य Panamera डेरिभेटिभहरूमा प्रयोग भएको अनुकूली वायु निलम्बन पनि नयाँ GTS मोडेलमा मानकको रूपमा स्थापना गरिएको छ। यसको तीन-कक्ष कार्यक्रमको साथ, यो निलम्बन-प्रणाली प्रणालीले लचीला नियन्त्रण र राम्रो वसन्त दर फैलाउँछ। दुई जीटीएस मोड्समा खेलकुद चास-एसिसले 10 मिलीमीटरलाई मानकको रूपमा कम गरीएको छ, पोर्श सक्रिय निलम्बन व्यवस्थापन (PASM) लाई पनि खेलकुद सेटअपका लागि अनुकूलित गरिएको छ, यसैले जीएसटी मोडेलबाट प्रदर्शन अपेक्षित प्रदर्शन गर्दछ। नतिजा? बकाया पार्श्व गतिशीलता।
ठूलो ब्रेकले लामो समयसम्म गतिशील गतिशीलतालाई समर्थन गर्दछ। के हो, एकीकृत Por-Schedule 4D चेसिस नियन्त्रण प्रकार्य विश्लेषण गर्दछ र सबै समयमा टास प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्दछ वास्तविक समयमा इष्टतम वाहन प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न। नयाँ पोर्श Panamera जीटीएस मोडेलहरूले पोर्शिक गतिशील चेसिस नियंत्रण खेल (पीडीसीसी स्पोर्ट) सहित पोर्श टोकक व्याख्यान प्लस (पीटीटी प्लस), पोर्श सिरेमिक कम्पोजिट ब्रेक (PCCB) र रियर अक्ष जस्ता अभिनव वैकल्पिक प्रणालीहरूसँग अझ बढी गतिशील प्रदर्शन गर्न सक्दछ। स्टीयरिंग।
तीन-च्याम्बर प्रविधिको साथ अनुकूलन हवा निलम्बन मानकको रूपमा लगाइएको छ
पनामामा जीटीएस र प्यानामेर जीटीएस स्पोर्ट टुरस्मो एडाप-टाभ तीन-कक्ष एयर निलम्बन मानकको रुपमा प्रयोग भएको छ। यो प्रणालीले बारम्बार उठाउनुभएको छ, साधारणतया यो आराममा आउँदा। प्रणाली प्रति स्ट्रट तीन वायु कक्षहरु संग सुसज्जित छ, जसमध्ये प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप देखि सक्रिय गर्न सकिन्छ, यसैले वसंत को दर को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। उदाहरणका लागि, चालकहरूले कम आधारभूत वसन्त दरमा चेसिस सेट गर्न सक्छन्, जसले आरामको असाधारण स्तरलाई सुनिश्चित गर्दछ, किनभने वसन्त दर elec-tronically हुनसक्छ जब आवश्यक हुन्छ दोस्रो अंशको रूपमा समायोजित हुन सक्छ - जस्तै जब accel-erating, ब्रेकिंग वा कम रोलिंग गति।
खेलाडीको लागि बनाइएको: पोर्श सक्रिय निलम्बन व्यवस्थापन (PASM)
मानक पोर्श सक्रिय निलम्बन व्यवस्थापन (PASM) प्रणाली एक इलेक्ट्रनिक डम्पिङ नियंत्रण प्रकार्य हो। प्रणाली सडक सतहको अवस्था र वर्तमान ड्राइभिङ्ग शैलीमा प्रतिक्रिया गर्दछ, लगातार तदनुसार प्रत्येक व्यक्ति चक्र को लागि damping समायोजन। नयाँ पोर्श प्यानामेर जीटीएस मोडलहरूमा प्रयोग गरिएका डाम्पर्सहरू विशेष गरी एक खेलकुद प्रतिक्रियाको लागि परिष्कृत गरिएको छ, यकीन छ कि सवारीहरूले पूर्व-निष्पादित प्रदर्शन र वाहनको पार्श्व गतिशील विशेषताहरूलाई सुधार पुर्याउँदछ। सामान्यमा, ड्राइभरले तीन ड्राइभ मोडहरू चयन गर्न सक्दछ: सामान्य, खेल वा स्पोर्ट प्लस। त्यसकारण, PASM कसरी काम गर्दछ? सेन्सरहरूले शरीर र चक्र आचरणहरूलाई छिटो एक्सेलेरेशन, ब्रेकिंग, छिटो कर्नर वा असामान्य सडक सर्-अनुहारमा ड्राइभिङको रूपमा उत्पन्न गरिने रेकर्ड। PASM ले डेटा पोर्श 4D-Chassis नियन्त्रण प्रकार्यमा रेकर्ड गर्दछ। कमान्ड केन्द्रले हालको गाडीको स्थिति गणना गर्दछ र PASM को हानिकारक विशेषता वक्र र विनियमित वायु निलम्बन वसन्त दर को चयन गरिएको मोड को आधारमा विनियमित गर्दछ। 4D चेसिस नियन्त्रणको लागि धन्यबाद, नियन्त्रण प्यार-एथरहरू निश्चित रूपमा प्रदर्शन गर्न अन्य वैकल्पिक इलेक्ट्रोनिक चेसिस प्रणालीसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
एक 48-वोल्ट प्रणाली: पीडीसीसी खेल सक्रिय रोल स्थिरीकरण सहित PTV प्लस सहित
वैकल्पिक पोर्श गतिशील चेसिस नियन्त्रण स्पोर्ट (पीडीसीसी स्पोर्ट) प्रकार्य 48-volt टेक्नोलोजीले गाडीको गतिशीलतालाई यसको एकीकृत इलेक्ट्रो-मेनिकल स्टेबलाइजरसँग अनुकूलित गर्छ। प्रणाली हाइड्रोलिक actua-tors संग प्रणाली भन्दा धेरै द्रुत प्रतिक्रिया दिन्छ, स्थिरमा स्थिर शरीर को रोल कम गर्न को लागि। पनामामा, पोर्श पोर्श टर्कक वेक्टरिंग प्लस (पीटीटी प्लस) संग पीडीसीसी स्पोर्ट प्रकार्य को संयोजन गर्दछ। विद्युतीय रूपमा नियन्त्रण रियर-अक्ष विलक्षण लकले रियर पाङ्ग्राहरू बीच भिन्नता फैलाउन ड्राइभिङ्ग टोककलाई अनुमति दिन्छ, जबकि व्हील-छनौट ब्रेकिंग हस्तक्षेपले पछिल्लो अक्षमा अतिरिक्त स्टीयरिंग टोकक उत्पन्न गर्दछ। नतिजा? अझ बढि अग्नि-िल स्टीयरिङ प्रतिक्रिया। के हो भने, PTV प्लस अंतर को लक गरेर कर्नर बाहिर ac-accelerating जब राम्रो तरिकाले कर्षण सुधार।
रेयर धुले स्टीयरिंग पार्श्व गतिशीलता र दीर्घकालीन स्थिरतामा सुधार गर्दछ
नयाँ पनमेरा जीटीएस मोडेल वैकल्पिक रियर अक्ष स्टीयरिंग संग सुसज्जित हुन सक्छ। 50 किमी / घण्टा सम्मको कम गतिमा, रियर पाङ्ग्राहरू घुमाउदै - चर चरमा आधारित गति गतिमा आधारित - अगाडिको पहलमा 2.8 डिग्रीको अधिकतम स्टीयरइङ्ग डिग्री सम्म। यो व्हील-बेसको भर्चुअल छोटोमा मिल्दछ। यसका फाइदाहरू कन्नेलमा एक गतिशील स्टीयरिंग प्रतिक्रिया समावेश गर्दछ, अत्यन्तै सजिलै सजिलै सजिलो हुन्छ, र कडा स्पटहरूमा राम्रो पार्किङ। उच्च गतिमा, पछि पाङ्ग्राहरू अगाडि अक्षको रूपमा एकै दिशामा हिड्छ, फेरि गतिमा निर्भर गर्दछ। यसकारण व्हीलबेसले प्रायः लामो समयसम्म लम्बाइरहेको छ, यसकारण स्थिरता बढ्दै गएको छ, उदाहरणका लागि जब सडकमा सडकमा परिवर्तन हुन्छ। रियर धुले स्टीयरिंग ले अगाडि अक्ष मा एक अधिक प्रत्यक्ष स्टीयरिंग अनुपात को लागि अनुमति दिन्छ, यसैले स्टीयरिंग प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप देखि खेलकूद को लाग््छ। रियर धुले स्टीयरिङले सामान्यतया सक्रिय सुरक्षा, सवारी गतिशीलता र आराममा सुधार गर्दछ।
पोर्श 4D चेसिस नियन्त्रण
पोर्श 4D चेसिस नियन्त्रण एक नियन्त्रण प्रणाली को एक केन्द्रीय नेटवर्क हो। यसले हालको ड्राइभिङ स्थितिको विश्लेषण गर्दछ जुन तीनवटा आयाम (लामो, पार्श्व र ऊर्ध्वाधर डाइ-म्याक्सिक्स), गाडीको स्थितिमा गणना गर्ने जानकारी। त्यसो गर्दा यो स्थितिलाई वास्तविक समयमा मानकीकृत ढाँचामा सबै चिसिस प्रणालीहरूसँग साझेदारी गर्दछ - चिसिस नियन्त्रणमा चौथो आयाम थप्दै। फलस्वरूप, प्रणालीहरूले कर्-भाडा ड्राइभिङ अवस्थामा एकीकृत प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ। एक उदाहरण: स्टीयरिंग र इन-क्रिएज चपलता र स्थिरता को समर्थन गर्न एक कुना गतिशील रूप मा स्टीयरिंग, PASM इलेक्ट्रनिक बाधा नियंत्रण, अनुकूली हवा निलंबन, रियर धुले स्टीयरिंग, पीटीवी प्लस र पीडीसीसी स्पोर्ट अधिनियम को एक यूनिट को रूप मा। पोर्श 4D चेसिस नियन्त्रण सबै चासिस प्रणालीहरूमा एक पल्स पठाउँदछ जब चालकले सुरु हुन्छ। यसले प्रणालीलाई प्रारम्भिक चरणमा प्रतिक्रिया दिन्छ र कोने वरपरको अधिकतम प्रदर्शन प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
ठूला ब्रेक शीर्ष-वर्गको गतिको लागि
मानक ब्रेक सिस्टमको आयाम - छठे पिस्टन निश्चित कल्याणहरू, पछिल्ला चार-पिस्टन निश्चित कल्याणहरू - नयाँ पनमेरा जीटीएस मोडेलको शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्न वृद्धि भएको छ। रातो ब्रेक कल्याणका साथ खैरो कास्ट आयरन ब्रेकले उच्च-स्तरीय क्षणिकरण सुनिश्चित गर्छन्। आन्तरिक भाँडा ब्रेक डिस्कहरूमा 390 X 38 मिलीमीटर को अगाडि अक्षमा र 365 X 28 मिलीमीटर को रियर मा आकार छ। पोर्श पानमेरा जीटीएस मोडेल पनि पोर्श सिरेमिक मिश्रित ब्रेक (पीसीसीबी) सँग वैकल्पिक रूपमा उपलब्ध छन्, जुन ट्रयाकमा परीक्षण र परीक्षण गरिएको छ।
दुवै जीटीएस मोडहरू ब्ल्याक पिक्चर फिल्डको साथ 20 इन्च प्यानामेरा डिजाईन पाङ्ग्राहरूसँग मानक रूपमा सुसज्जित छन्। साइज 275 / 40 ZR 20 अगाडि अगाडि र 315 / 35 ZR 20 टायर पछि इष्टतम पकड़ सुनिश्चित गर्नुहोस्।
एक शक्तिशाली उपस्थिति र व्यापक उपकरण
नयाँ जीटीएस मोडेलले उनीहरूको अनौठा स्थान लक्जरी सैलून कोटीमा खेलकूद कारहरूको रूपमा विशेष रूपमा खेलकुद डिजाइनको डिजाइन र उपकरणको साथ रेखांकन गर्दछ। Panamera GTS र Panamera जीटीएस खेल Turismo लामो समय 5,053 मिलीमीटर, 1,417 मिलीमीटर लामो र 1,937 मिलीमीटर चौडाई। 2,950 मिलीमीटरको ठूलो व्हीलबेस एकछिन शरीरको छोटो ओभरहोङमा फैलिन्छ। दुवै मोडेल 20 इन्च प्यानामेरा डिजाईन पाङ्ग्राहरूसँग स्ट्यान्ड-अर्डरको रूपमा सुसज्जित छन्, रमाईलो रस चमकको साथ कालोमा चित्रित हुन्छ।
कालो हाइलाइटहरूसँग मानक खेल डिजाइन प्याकेज
अगाडि, जीटीएस मोड्स बाकी प्यानामेर मोडेलबाट भिन्न हुन्छन् किनभने उनीहरूको नयाँ खेल डिजाइन अगाडि एप्रन ब्ल्याक स्पोलर होंठ संग। मानकको रूपमा, पोर्श गतिशील लाइट प्रणाली (पीडीएलएस) सहित, एलईडी हेडलाइट्स, चार-बिन्दु दिन चलिरहने रोशनीहरू, कुन्निङ रोशनीहरू, हेडलाइट सफ्टवेयर र गतिशील हेडलाइट दायरा नियन्त्रणले रातमा आदर्श दृश्यता सुनिश्चित गर्दछ। 84 को साथ पीडीएलएस प्लस सहित डार्क एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स व्यक्तिगत रूप से सक्रियता योग्य एलईडी एक विकल्प को रूप मा उपलब्ध छ। खेलकुद डिजाइन साइड स्कर्टले कालो प्यान्ट फिजको साथ नेत्रहीन रूपमा दुई जीटीएस मोडेलहरू कम गर्दै, उनीहरूको प्रदर्शन-आधारित डिजाइनमा जोड दिन्छन्। साइड विन्डो स्ट्रिपहरू उच्च-चमकमा चित्रकारी हुन् र मानकको रूपमा र अगाडिको ढोकाको रूपमा GTS पत्र सुविधा। काला रियर मा डोमी-नन्ट रंग पनि छ, जहाँ खेल डिजाइन रियर एप्रन, "पोर्सचेई" लोगो र मोडेल पदनामले समान प्यान्ट फिनिशको सुविधा दिन्छ। मानक खेल निकास प्रणालीमा दुई जुत्ता पाइप पाइप्स पनि कालो हुन्। एलईडी टेक्नोलोजीको साथ तीन आयामी पूरै रोशनीहरू, चार-बिन्दु ब्रेक रोशनीहरू र प्रकाश पट्टी एकीकृत गरिएको विशिष्ट जीटीएस अर्कै रंगको टिन्टमा टाढा हुन्छ। फिर्ता लेने योग्य रियर स्पोलर खेलहीन सैलून को इलेक्ट्रिक tailgate मा निर्बाध रूप देखि एकीकृत छ, जो मानक को रूप मा उपयुक्त छ। नयाँ पोर्श प्यानामेर जीटीएसमा, विङ्ग एक ठूलो सतह क्षेत्र बनाउन विस्तारित हुँदा विभाजित गर्दछ। यसले उच्च गतिमा पछिल्लो अक्ष मा डाउनफोर्स बढाउँछ।
भित्र, पनामामा एक उच्च स्तरको आराम, पोर्शका लागि खेलकुद विशिष्ट र उच्च स्तरको चरमता संग एक avant-garde डिजाइन जोड्दछ। दुई जीटीएस मोडेलहरूले विशेष गरी स्प्यानी हाइलाइटहरू पनि प्रस्तुत गर्दछ र मानक उपकरणको विस्तारित दायरा प्रदान गर्दछ। मेमोरी पैक-युगको साथ अनुकूली, बिजुली 18-राड खेलकुद सीटहरू चालक र अगाडि यात्री दुवै राम्रो साइड समर्थन र धेरै कम-किल्ला दुवै प्रस्ताव गर्दछ। केन्द्र सीट प्यानलहरू आल्कांतारामा आउँछन्, जुन ढोकाहरू ढोकाहरू, सूर्य भिसाहरू, हेडलिनर र ए, बी र सी स्तम्भहरू पनि समावेश गर्छन्। मानक उपकरणमा एल्कोन्टा-आर ट्रिम, गियर-परिवर्तन पेडलहरू र खेल क्रान्डो प्याकेजको लागि मोड स्विचको साथ एक ताप बहुभाषी खेल स्टीयरिंग व्हील समावेश गर्दछ। GTS लोगो प्रवेश प्रविष्टिहरू, पुन: काउन्टर र टाउको बन्दुकहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। रेम काउन्टर डायल पनि कार्र्म रेड वा क्रेयोनमा वैकल्पिक रूपमा उपलब्ध छ।
इंटीरियर जीटीएस इन्टरनेट प्याकेजको साथ बढि बढाउन सकिन्छ। यसमा सीट बेल्ट, टाउको बन्दुकहरूमा कचौरा अक्षर, र क्यान्सर रेड वा क्रेयोनको विपरित रंगहरूमा सीटहरू र फ्लोट माटलाई सजावटी सिलाई पनि समावेश गर्दछ।
मानक अनलाइन कनेक्टिविटी संग पोर्श उन्नत कर्कपिट
दोस्रो-पीढी पोर्श प्यानामेरामा भेटिएको सामान्य विशेषता एक डिआईई-पिल डिस्प्ले र अपरेन्टिभेसन अवधारणा हो - मानक पोर्श उन्नत कर्कपिट टच-संवेदनशील प्यानल र अनुकूलन प्रदर्शनमा। दुई सात इन्च स्क्रिनले अन्तरक्रियात्मक ककपिट बनाउँछ। केन्द्र कन्सोलमा 12.3 इन्च टचस्क्रिन पोर्च कम्युनिकेशन्स मैनेजमैंट (PCM) प्रणालीमा केन्द्रीय अपरेसन र डिस्प्ले तत्व रूपमा अनलाइन नेभिगेसन सहित कार्य गर्दछ। Infotainment प्रणाली को उपयोग गर्न को लागी आसान र सहज छ र व्यक्तिगत स्वाद को अनुरूप गर्न को लागी अनुकूलित गर्न सकिन्छ। पूर्व परिभाषित टाइल्सहरूको लागि धन्यबाद, ड्राइभरहरूसँग छिटो र सजिलो तरिकाले आफ्नो मनपर्ने प्रकार्यहरू भन्दा पूर्ण गृह स्क्रिन सिर्जना गर्न, जस्तै उनीहरूको मनपर्ने रेडियो स्टेशनहरू, शनि-नेभिगेसन गन्तव्यहरू, टेलिफोन नम्बरहरू वा खेल निकास सक्रियता प्रकार्य। एक जानकारी विजेट पूर्ण HD स्क्रिनको दाहिने हातमा थप्न सकिन्छ, प्रयोगकर्तालाई PCM मा अन्य प्रकार्यहरूको पहुँच प्रदान गर्न। उदाहरणका लागि, पर्दाको बीचमा अन्तरक्रियात्मक क्षेत्रले साई-नेभिड प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जबकि दाहिने हातको फोन फोन प्रकार्यको लागि प्रयोग गरिन्छ। छवटा व्यक्तिगत प्रोफाईल कन्फिगर गर्न सकिन्छ। साथै विभिन्न गृह सेटिङहरू, यी प्रोफाईलमा रोशनीहरूका लागि प्राथमिकता कन्फिगरेसनहरू, ड्राइभ प्रोग्रामहरू र सहायता प्रणालीहरू छन्।
प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो मोबाइल फोन वा स्मार्टफोन जडान प्लस मोड्युलसँग जोड्न सक्छन्। पनामामा एलईटी फोन मोड्युल र सिम कार्ड पढ्ने-एरसँग सुसज्जित छ। निर्मित-सिम कार्डको लागि धन्यबाद, हरेक पनमेराराले सबै समयलाई मानकको रूपमा मानकमा रहन सक्छन्। वास्तविक समय ट्राफिक जानकारी द्रुत र विश्वसनीय नेभिगेसनको लागि उपलब्ध छ, हालको ट्राफिक अवस्था र डीई-मेल मार्ग समायोजनको द्रुत मूल्यांकन सुनिश्चित गर्न। अन्य पोर्श जडान सेवाहरू पनि उपलब्ध छन्। प्रत्येक काउन्सिल र वाहनोंमा उपलब्ध सेवा सेवाहरूको गहन अवलोकनको लागि, कृपया www.porsche.com/connect हेर्नुहोस्।
Panamera मा पहिलो हेड-अप डिस्प्ले
मानक वा वैकल्पिक सहायता प्रणालीको दायरा नयाँ Panamera GTS मोडेलमा सुरक्षित र सहज यात्रा सुनिश्चित गर्दछ। लेन परिवर्तन सहायक प्रकार्य र लेन राख्ने सहायक जस्तै प्रोभ्युन सिस्टमहरू ट्राफिक साइन पहिचान सहित अब एक Panamera मा पहिलो हेड-अप डिस्प्लेद्वारा सामेल हुन्छन्। यो प्रदर्शन प्रणाली प्रो-जेकिजहरू सबै सान्दर्भिक वाहन जानकारी सिधै चालकको लाइन पूर्ण-कोलमा। अन्य हाइलाइटहरू वैकल्पिक पोर्श इननोड्रोभरी प्रणाली र राई Vi-sion सहायक समावेश गर्दछ। यो नयाँ सुविधाले 300 मिटर सम्मको दूरीमा मानिसहरू र ठूला पशुहरूलाई पहिचान गर्न थर्मल इमेजिङ क्यामेरा प्रयोग गर्दछ। त्यसपछि त्यस चालकलाई सजग गराउन ककपिटमा रंग-कोडित चेतावनी प्रयोग गर्दछ। यदि 84 indi-vidially सक्रियतायोग्य एलईडीको साथ प्रत्येक पक्षमा सक्रिय एलईडी म्याट्रिक्स मुख्य हेडलाइटहरू बोर्डमा छन्, मानिसहरू डिपाइड बीम रेंज बाहिर बाहिर निस्कन्छन् भने उनीहरूले गणना गलियारे भित्र स्थित हुन्छन् भने गाडी चालकलाई पहिले प्रतिक्रिया दिन अनुमति दिन्छ।
चालकमा छुट्याउने तनाव: पोर्श इनोओ ड्राइभिङ्ग र ट्राफिक जाम सहयोग
पोर्श इनओडभभरी प्रकार्य सहित अनुकूली क्रूज नियन्त्रण पनि अगाडि बढ्न सक्छ। तीन-आयामी, उच्च-रिजोल्युसन नेभिगेसन डेटामा आधारित, प्रणालीले अधिकतम एक्सेलरेसन र गतिवर्णन मानहरूको साथ साथै अर्को तीन किलोमिटरको लागि गियर र तल्लो सेटिङ्हरूको गणना गर्दछ र सक्रिय गर्दछ। एक इलेक्ट्रनिक सह-पायलटको रूपमा अभिनय गर्दै, यसले स्वचालित रूपमा खाता कोनेहरू, इनलिन्स र गति सीमामा लिन्छ। अन्य वाहनों र वर्तमान गति सीमा रडार- र भिडियो आधारित सेन्सर प्रणाली द्वारा दर्ज गरिएको छ र त्यसपछि वाहन प्रतिक्रिया मा शामिल छ। सहायता प्रणाली को दायरा पनि विस्तार गरिएको छ कि स्थितिहरु को कवर गर्न को लागी जहां पोर्श को सबै खुशी नहीं ड्राइभिङ्ग - यातायात जाम। ट्राफिक जाम एस्टिस्ट सिस्टमले ड्राइभरलाई इन्टरनेट-ग्रेटेड लाइटइडाइनल र ड्राइभिङ्ग निर्देशनद्वारा 60 किमी / घण्टा सम्म ट्राफिक जाममा ड्राइभरलाई समर्थन गर्दछ। ACC प्रकार्यद्वारा नियन्त्रित, वाहनले इलेक्ट्रोनिक मेनेनिक स्टीयरिंग प्रकार्यद्वारा समर्थित कारहरूको पहिचान गरिएको लाम पछ्याउन सक्षम छ, जुन सजिलै संग कुनै पनि समयमा ओभरराइड गर्न सकिन्छ।
अनुकूलन विकल्पहरू साथ हेड-अप प्रदर्शन
नयाँ जीटीएस मोडेलको सुरुवात संग सहकारी, पोर्शले सबै Panamera मोडेलको लागि वैकल्पिक हेड-अप प्रदर्शन पनि प्रस्तुत गर्दैछ। पहिले नै Cay-enne मा उपलब्ध छ, प्रणाली परियोजनाहरु पूर्ण-रंग वाहन-सान्दर्भिक जानकारी प्रत्यक्ष रूपमा चालकको लाइनमा। टाउको-अप डिस्प्ले विन्ड्रेस्क्रिनको अगाडि सिधै ड्यासबोर्डमा एकीकृत हुन्छ। चालकको लागि, प्रदर्शनले 2.3 मा-ट्रसको वरिपरि प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। टाउको-अप डिस्प्लेको उचाइ, चमक र रोटेशन पनि समायोजित गर्न सकिन्छ। सेटिङ्हरूलाई अलग मेनुमा कन्फिगर गरिएको पोश संचार व्यवस्थापन (PCM) प्रणालीमा। ड्राइभरले जानकारीको दायराबाट windscreen मा प्रोजेक्ट गर्न सक्दछ, जस्तै साईन-नेभिगेसन निर्देशनहरू, सहायक प्रणाली डेटा, चेतावनी र अन्य कार्यक्रमहरू। डिस्प्ले क्षेत्र छह विभाजनमा विभाजित छ।
ड्राइभहरूले चार अलग-अलग प्रिसेटहरूबाट छनौट गर्न सक्छन्, जसमध्ये प्रत्येकले ve-hicle जानकारी को एक श्रृंखला प्रदर्शन गर्दछ। मानक दृश्य मुख्य रूपमा सहायता प्रणालीको गतिविधि र स्थितिमा केन्द्रित हुन्छ। शीर्ष रेखा को बीच एक नै जानकारी को रूप मा उपकरण क्लस्टर प्रदर्शन को रूप मा दिखाता छ। प्रदर्शनको शीर्ष बायाँले हालको मार्गमा लाग्ने ट्राफिक संकेतहरू पहिचान गरेको छ। तल्लो रेखाको बीचले वर्तमान गति देखाउँछ। यदि मार्ग निर्देशन सक्रिय छ भने, नेभिगेसन निर्देशन प्रदर्शनको दायाँतिर देखा पर्दछ। खेल क्रान्टोमो मोडमा, अतिरिक्त जानकारी शीर्ष-अप डि-प्लेमा थपिएको छ। शीर्ष लाइनको मध्यमा काउन्टर काउन्टर देखाउँछ। यदि खेल प्रतिक्रिया func-tion सक्रिय छ भने, शीर्ष-दाँया कुनामा बाँकी प्रकार्य समय देखाउँछ। गियर डि-प्ले तल दाँयामा देखिन्छ। बायाँ-ह्यान्ड साइडले गोदाम र गोद नम्बरको बारेमा चालक प्रदान गर्दछ। कम्पैक्ट डिस्प्ले निक्कै आवश्यक इन्फिगरेसनमा अन्डर-रिंक स्ट्रिप गर्दछ। उदाहरणको लागि, शीर्ष खण्ड मात्र वर्तमान गति सीमा र नेभिगेसन निर्देशनहरू देखाउँछ। तलको सेक्शनले हालको गाडी गति र सहायता प्रणाली स्थितिलाई नामाकरण गर्दछ। आवश्यक भएमा, ड्राइव-एआरले प्रदर्शनको लागि अनुकूलित दृश्य सिर्जना गर्न सक्छ। यसले व्यक्तिलाई प्रदर्शन प्रदर्शन तत्वहरूबाट चयन गर्न सक्षम गर्दछ। प्रयोगकर्ता-विशिष्ट प्रदर्शनहरू PCM मा कन्फिगर गरिएको छ।
यसको अतिरिक्त, चयन गरिएको प्रिसेट को लागी स्थितिक जानकारी प्रदर्शित हुन्छ। उदाहरणका लागि, वाहन टक्करको जोखिममा छ भने ठूलो चेतावनी प्रतीक देखिन्छ। यदि आगमन कल हो भने वा सिम नियन्त्रण सक्रिय हुन्छ भने सिम-बोलहरू पनि चालकलाई सजग देखिन्छ। जब प्रदर्शन स्वचालित रूपमा दिन र रात बीच स्विच गर्दछ, अस-खेलहरू दिनको सम्बद्ध समयमा हेर्न सजिलो छ। वैकल्पिक रूपमा, चालकले म्यानुअल रूपमा प्रदर्शन परिवर्तन गर्न सक्छ।
असाधारण डिजाइन, अनुकूली छत स्पोलर र4+ 1 सेटिंग अवधारणा
नयाँ पनमेरा जीटीएस मानक मानक सैलून को रूपमा उपलब्ध छैन। पहिलो पटक कहिल्यै, यो अब खेल टूर्स्मोको रूपमा पनि उपलब्ध छ। डिजाइन सर्तहरूमा, जीटीएस मोडेलले नयाँ स्पोर्ट टुरिस्मो दायरा र त्यसको अवधारणाका सबै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। छत रेखा स्पोर्ट्स सैलून संस्करणको विपरीतमा उठाइएको छ, रियरमा यसलाई सजिलो र आउट गर्न सजिलो बनाउँदा जबकि हेडरूम बढ्दै जान्छ। केवल एक्सएनएनएक्सएक्स मिलिमिटरको उचाईमा चौडा-सुरुवात ढिलाइबाट मानक डिब्बेको क्षमताले मानक बिजुली सक्रियता र कम लोड भर्नको साथको क्षमताको सामान। यदि खेल टुरस्मो आराम पहुँच संग सुसज्जित छ भने, टाढाको कुञ्जी मार्फत अधिकृत प्रयोगकर्ताहरूलाई पहिचान गर्दछ किनकि एक सरल खुट्टा आचरण सबैले tailgate खोल्न वा बन्द गर्न लिन्छ। सबै खेल टूर्स्मो मोडेलहरू जस्तै पोर्श पनामाराम जीटीएस मानकको रूपमा तीन-सेटर रियर बेंचसँग सुसज्जित छ। दुई बाह्य सीटहरु देखि - यस खेल देखि आशा को रूप मा खेल को रूप मा र आरामदायक को रूप मा - व्यक्तिगत सीटहरु को रूप मा डिजाइन गरिएको हो, यो परिणाम मा एक 622 +2कन्फिगरेसन मा परिणाम। ग्राहकहरूले पछिको लागि दुई इलेक्ट्रोनिक समायोज्य व्यक्तिगत सीटहरू पनि अप्ट आउट गर्न सक्छन्। पछिल्लो सीटहरूको शीर्ष किनारामा लोड हुँदा, जीटीएस स्पोर्ट टुरिस्मोले 1 लिटरहरूको स्टाउज क्षमता प्रदान गर्दछ। तीन रियर सीट ब्याक्राइजहरू अलग-अलग वा सँगै जोड्न सकिन्छ (520 अनुपात: 40: 20 अनुपात) र सामान डिब्बेबाट इलेक्ट्रोनिक अनलक गर्न सकिन्छ। यो कन्फिगुरेसनले अधिकतम 40 लिटरमा लोड भोल्युमलाई इन्फिगर गर्दछ।
पोर्शले Panamera स्पोर्ट टोरस्मो को लागि वैकल्पिक लोड डिब्बे प्रबंधन समाधान प्रदान गर्दछ। चर प्रणाली को सबै आकार र आकार को वस्तुहरु लाई सुरक्षित रूप देखि परिवहन गर्न को लागी डिजाइन गरिएको छ र दुई सुरक्षित रेल सामान किराया फर्श, चार ढीला आँखों, र एक सामान डिब्बे विभाजन मा एकीकृत शामिल छ। एक लचीला-ब्लाउट सामान कम्पाइन्ट मानकको रूपमा समावेश गरिएको छ।
यदि यो महत्त्वपूर्ण बैठकको लागि एक ल्यापटप चार्ज गर्न चाहिएको छ भने, यसले सामान डिब्बेमा वैकल्पिक 230 V सकेट प्रयोग गरिन सक्छ।
छत स्पोलर सम्मको अतिरिक्त डाउनवर को 50 किलोग्राम सम्म
प्यानामरा स्पोर्ट टुरिस्मोको मानक छत ट्रेलर यो गाडीको बिरालोमा अनियमित छ। ड्राइभिङ्ग साइड-इजाजत र चयन गरिएको ड्राइभिङ मोडमा यसको कोणलाई तीन सेटिङ मध्ये एकमा समायोजन गर्न सकिन्छ। यो पीछे अक्ष मा अतिरिक्त डाउन-बल 50 किलोग्राम सम्म उत्पन्न गर्न सक्छ। पोर्श एक्वायड एरोरोमिनिज (PAA) प्रणालीको भागको रूपमा, विच्छेदले 170 किमी / घण्टा सम्म गतिमा फिर्ता लिन्छ र7डिग्री कोण को कोणमा रियर ढलान छत रेखा पछ्याउँछ। 170 किमी / घण्टा माथिको गति बाट, छत स्पोलर स्वचालित रूपमा प्रदर्शन स्थितिमा प्लस एक डिग्री मा पुग्छ, सवारी स्थिरता र पार्श्व गतिशीलता भित्र। खेल र खेल प्लसको ड्राइभिङ मोडमा, छत विच्छेदक पहिले नै 90 किमी / घन्टा देखि गति मा यो स्थितिमा चल्छ। सक्रिय समर्थन सुविधाको रूपमा, PAA स्वचालित रूपमा स्पोलर कोण समायोजन गर्दछ र 26 डिग्री गति 90 किमी / घण्टा सम्म गतिमा छ भने वैकल्पिक पानोरामा स्लाइडिङ छत खुला छ। यसले कुनै पनि अशांति वायु आन्दोलनलाई सन्तुलित बनाउँछ र यस अनुसार शोरको स्तर घटाउँछ।
क्लिक र किन्नुहोस् कार सहायक उपकरण थोक मूल्यहरु